Ukuphupha ngesali Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Phupha malunga nesali. Kuba siyaphupha nendlela amaphupha anokuchazwa ngayo, kwesi sikhokelo sizama ukuphendula le mibuzo.
Isihlalo sisihlalo esinezihlalo, oko kukhwela ihashe, idonki okanye inkamela kulula kwaye ngaphezulu kwako konke kukhululeke ngakumbi kumkhweli. Amacala asecaleni nawo aququzelela ukunyuka kwesilwanyana.
Kubomi bemihla ngemihla, uninzi lwamaxesha sihlala esihlalweni sebhayisikile okanye isithuthuthu. Isali ebaluleke kakhulu kwezentlalo kwiinkulungwane ezidlulileyo. Ukubeka umntu esihlalweni kuthetha ukunika loo mntu umsebenzi.
Ukuba umntu uphupha ngesali, banokuzibona njengomkhweli onebhongo nehashe. Mhlawumbi ukuphupha kunolwalamano lokwenene namahashe. Ungonwaba kakhulu ukufumana inkxaso ethile kwisihlalo esingasemva kwesilwanyana. Ukutolikwa kwamaphupha, iimvakalelo zamaphupha ngexesha lephupha zityhila.
1 Uphawu lwephupha «isihlalo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isihlalo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isihlalo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isihlalo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukubopha isali yehashe kukunyanzelisa ukuthanda kwakho kuyo. Kufuneka athobele umkhweli ephupheni njengakwinyani. Eli nqaku lidlala indima ebalulekileyo ekutolikeni amaphupha, kuba uphawu lwephupha lunokuba luphawu lwamandla.
Ngokukodwa ukuba umfazi uphupha ngesali, uchaza umnqweno wakhe ulawulo lwezesondo. Kumaphupha amadoda, uphawu lwephupha lubonisa isidingo sokuthatha ubomi ezandleni zakho. Ngokunokwenzeka umphuphi uzibona njengomntu ongonwabanga ngesimboli sephupha "isali".
Ukuhlala ngokuqinileyo esitulweni, kwelinye icala, luphawu lwendawo yokuhlala ekhuselekileyo ekutolikweni kwephupha.
Kutoliko oluthandwayo lwamaphupha, kuxhomekeke kwimeko apho uphawu lwephupha "isali" livela khona. Ukuba yeyomntu ongamaziyo, bonakalisa uloyiko ingcinezelo ngomnye umntu. Nangona kunjalo, uphawu lwephupha lukwanokubhengeza umyalezo olungileyo okanye undwendwelo olothusayo.
Ukuba isali sijinga esitalini, umntu ophuphayo uya kufumana igama. Ukuba usebenzisa isimboli sephupha ngokwakhe, umntu unamandla kuye. Ukubona isihlalo kuhlala kuye njengoko kusazisa izicwangciso zohambo.
Nabani na ohleli esihlalweni sehashe unokuqiniseka ngenkxaso yomhlobo olungileyo. Ukuba iphupha liyasilela, umntu ophuphayo ubonakalisa ukungaziphathi kakuhle, ukusilela kunye nokuhla kwegama.
Uphawu lwephupha «isihlalo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, ukuhlala esihlalweni ngamava enkanuko. Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha luhambelana ngqo nokuqhuba. Le ntshukumo ayihambelani ngokungazi nesenzo sesondo. Nangona kunjalo, isali ikwangumboniso wenkcubeko kwaye, ke, ubuchule kokubini omnye umntu kunye nethuku lomntu.
Kwingcaciso yengqondo yamaphupha, isali emtyibilizi ngumqondiso osisilumkiso ovela kwi-subconscious yokoyika ukulahleka. Ukuba isali ayimfanelanga umkhweli okanye ihashe, isimboli yephupha inokuba neemeko zokuphila zangaphandle, elo phupha liziqondayo ukuba alonwabanga kwaye liyathintela.
Uphawu lwephupha «isihlalo» - ukutolika kokomoya
Ukubeka isali kwisilwanyana ephupheni kubonisa into esebenzayo nenempumelelo. Ngokucacileyo umphuphi unecebo kwaye sele eqalile ukuliphumeza.
Ekuchazeni amaphupha okomoya, uphawu lwephupha "isali" kufuneka lutolikwe njengento yokubumba nokukhokela ubukho bomntu.